दिल्ली डेरडेभिल्सले चेन्नार्इलार्इ दियाे १ सय ६२ रनकाे लक्ष्य, चल्ला त सन्दीपकाे जादू ! – Makalukhabar.com
दिल्ली डेरडेभिल्सले चेन्नार्इलार्इ दियाे १ सय ६२ रनकाे लक्ष्य, चल्ला त सन्दीपकाे जादू !
एजेन्सी । भिभो आइपिएलको ५२ औं खेलमा आज दिल्ली डेरडेभिल्स र चेन्नाई सुपर किङ्स भिड्दै छन् । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा १ सय ६२ रनको याेगफल तयार पारेको छ ।
दिल्लीका लागि लयमा रहेका रिसभ पन्तले ३८ रन बनाए । त्यस्तै अन्त्यमा विजय शंकर र हर्सल पटेलले अवजित ३६/३६ रन जोडे । ओपनरद्वय पृथ्वी श (१७ रन) र श्रेयस ऐयर (१९ रन) क्रिजमा धेरै समय जम्न सकेनन् भने ग्लेन म्याक्सवेल ५ रनमै आउट भएका थिए । चेन्नाईका लागि लुङि गिडीले २ विकेट लिए भने दिपर्क चहर, श्रदुल ठाकुर र रविन्द्र जडेजाले १/१ विकेट लिए ।
चेन्नाई १२ खेलमा ८ जित दर्ता गर्दै १६ अंकका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । आजको खेल जित्न सके चेन्नाई शीर्ष २ मा रहने पक्का हुनेछ । अर्कोतर्फ अन्तिम ४ मा पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको दिल्ली भने तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेको छ । १२ खेलबाट दिल्लीको केवल ६ अंक रहेको छ ।